“Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro Mareykanka ka hor inta aanan ciyaaraha ka fariisan” – Mesut Ozil – Gool FM
“Waxaan doonayaa inaan ka ciyaaro Mareykanka ka hor inta aanan ciyaaraha ka fariisan” – Mesut Ozil
Haaruun January 12, 2021
(London) 12 Jan 2021. Mesut Ozil ayaa si maldahan u sheegay, halka uu mustaqbalkiisu yaalo isaga oo muujiyay rabitaankiisa ah in uu ka ciyaaro labadaba dalka Turkiga iyo horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer.
Xiddiga kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mesut Ozil ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu ka ciyaaro dalka Mareykanka ka hor inta uusan ciyaaraha ka fariisan.
Kubbad sameeyaha Kooxda Arsenal ayaa la la xiririinayey inuu u dhaqaaqo kooxda MLS-ka dheesha ee DC United, iyadoo xiddigan reer Jarmal uu soo jeediyey haatan inuu halkaas ku dambeyn karo, inkastoo mustaqbalkiisa Gunners uusan kala caddeyn.
“Xaqiiqdii waan sii wadi doonaa ciyaarista kaddib marka aan ka tago Arsenal,” Ozil ayaa sidaas ku yiri Twitter-kiisa intii lagu guda jiray su’aalo iyo jawaabo uu la qaatay taageerayaasha.
“Waxaa jira labo wadan oo aan doonayo inaan ka ciyaaro kubadda cagta ka hor inta aanan fariisan, waana Turkiga iyo Mareykanka.
“Haddii aan aado Turkiga, waxaan aadi lahaa oo kaliya Fenerbahce.”
Qandaraaska Ozil ee Arsenal ayaa dhacaya xagaaga, waxaana jira warar xan ah oo la xiriirinaya xiddigan labada dal ee aan kor ku soo sheegnay.
Macallinka Man United ee Ole Gunnar Solskjaer oo ka hadlay xaaladda Shaw, Lindelof, Pogba, Bailly & Cavani ka hor kulankooda caawa ee Burnley
Miyuu Sergio Aguero seegi doonaa kulanka kooxdiisa Man City ay la leedahay Brighton? – Tababare Pep ayaa ka jawaabaya